Wiilka Trump oo qiray inuu la kulmay qareenadii Russia is uu uga helo xog waxyeelo ku ah Clinton - Horn Future
Wiilka Trump oo qiray inuu la kulmay qareenadii Russia is uu uga helo xog waxyeelo ku ah Clinton
WASHINGTON (Horn Future)- Wargayska New York Times ayaa sheegay in wiilka curad ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u sheegay baadhayaasha Senate inuu diyaariyay kulankii bishii June 2016 dhexmaray isaga iyo qareenada Russia u dhalatay.
Ninkan ayaa ku sheegay sababaha kulankiisa ee haweenaydan in laga yaabo inay u sheegi lahayd xog waxyeello u leh Hillary Rodham Clinton oo la tartamaysya aabihii.
Waxa wargeyskani intaa ku daray in wiilka Donald Trump war qoraal ah oo hore diyaariyay ka hore sheegay baadhayaasha guddiga garsoorka ee Senate ka inay muhiim tahay in la ogaado inta ay la egyatay “xaq u yeelashada” inay noqoto madaxweyne Clinton.
Waxa sido kale wargeyskani sheegay in wiilka Trump u sheegay baadhayaasha in Kulankani ka qabsoomay dhismaha ( Tower Trump) kaas oo aynan ka dhalan wax natiijo ah,isaga oo ku adkeystay in uunan wax gacan saar ah la lahayn ololahii shirqoolka ee Russia ay wareerka ku galisay habsami u socodka doorashadii madaxtinimada ee sanadkii la soo dhaafay.
« Kuuriyada Koonfureed oo qirtay in la rakibay nidaamka difaaca THAAD ee ka hortaga gantaalaha	» Raysal wasaaraha Pakistan oo furay warshadii shanaad ee tamarta nuclear ka laga dhaliyo